Glass Bulding, Muraayadaha Dabacsan, Muraayadaha Dahaarka leh - Muraayadda farxadda leh
Dhismaha Muraayada-Xaragada Xariirta
Muraayadaha Qalooca Qalooca
muraayadda dahaarka leh
Muraayadda Daabacaadda Dijital ah
Guddiga Goynta Muraayadda
In Albaabka Silk-Screen Glass
Mashiinka muraayadda Louver
Filim Smart & Pdlc
Muraayadda sare ee miiska
Muraayad qadiim ah
Muraayadda Midabka Midabka leh
Muraayad la kariyey
Muraayad la farsameeyay
Muraayad aad u weyn
Yantai Joyshing Glass Co., LTD. ， Oo ah soo saare ku takhasusay oo horseed u ah iyo alaab-soo-saare wax soo saarka galaaska kala duwan ee Shiinaha, ujeedadeedu tahay inay bixiso xal hal-joog ah oo muraayad u ah dhismaha, qurxinta, gaadiidka, difaaca, firaaqada & isboortiga iyo wixii la mid ah.
Ma taqaanaa sida saxda ah ee loo rakibo albaabbada dhalada ah
Iyada oo hal-abuurnimo joogto ah iyo horumarinta warshadaha muraayadaha, alaabada muraayadaha ayaa si buuxda loogu dhex daray nolosheena, qurxinta guriga dhexdiisa inta jeer ee la isticmaalayo muraayadda ayaa aad iyo aad u badan, albaabka quraaraduna kuma koobna oo keliya warshadaha dhismaha waxaa loo yaqaanaa sida badanaa loo isticmaalo qurxinta ...
Muraayadaha Laabista kulul
Muraayadaha Qaabilaada Kulul BY ADMIN NOV. 24, 2020 Muraayadda qurxinta waa muraayad quraarad ah oo si gaar ah loogu adeegsaday qurxinta, badankoodna si qoto dheer loo farsameeyay, oo ay ku jiraan samaynta, dhaxanta, rinjiyeynta, iwm. Joysh ...
Muraayad ilaalin ah oo baaxad weyn
Waxaa qoray Yantai Joyshing Glass Co., Ltd kadib markii la dhisay mashruuca yantai HouSha Square glass sand sand cantilever project, ayaa si guul leh ku soo dhamaaday, wareega muraayadda ilaalada ah ee 136 mitir, dhamaan biriijka ilaaliya wuxuu isticmaalay 15 + 15 muraayad heer sare ah, oo hal galaas ah dhererka ...
Faa'iidooyinka Muraayadaha Dahaarka leh
Waxaa loola jeedaa in loo hoggaansamo heerarka qaranka ee muraayadda dahaarka leh, muraayadda la shubay, iyo muraayadaha godadka laga sameeyay oo iyaga laga sameeyay. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxqabadka guud ee muraayadaha lakulmay iyo muraayadda godan ee ka samaysan dhalada dahaarka leh ayaa ugu fiican. Guryaha casriga ah, saameynta dahaarka dhawaqa waa mid wanaagsan, waxayna noqotay mid o ...
Muraayadda Dabacsan, Faa’iidooyinkeeda iyo Faa’iido-darrooyinkeeda, Dhammaantiin ma wada og tihiin?
Muraayadda dabacsan waa nooc ka mid ah galaaska badbaadada. Xaqiiqdii, sidoo kale waa nooc ka mid ah muraayad qadarin leh. Si loo kordhiyo xoogga muraayadda, hababka kiimikada ama qaababka jirka waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo culeys cadaadis leh oo ku dhaca dusha muraayadda. Marka muraayadda la hoos geeyo xoog dibedda, surfa ...